warkii.com » Al-Shabaab oo afduubtay 60 qof oo isugu jira odayaal, haween iyo caruur
Baydhaba (warkii.com) – Wararka aan ka heleyno gobolka Bay waxay sheegayaan in dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dad badan ka afduubteen tuulooyin hoos taga degmada Buur-hakaba.
Dadka ay afduubteen Al-Shabaab waxaa tiradooda lagu sheegay in ka badan 60-qofood, oo u badan odayaal, haween iyo caruur.
Dad ku nool deegaanka Lahobare oo hoos taga degmada Buur-hakaba, isla markaana ah halka laga afduubtay dadka ugu badan ayaa warkii.com u sheegay in Al-Shabaab dadkoodii ay la’aadeen dhanka deegaanka Iidaale oo ay maamulaan.
Dadka noo waramay oo codsaday in magacyadooda aan warbaahinta loo isticmaalin ayaa sababta loo afduubtay dadkaas noogu sheegay inay salka ku heyso, dagaal maalmo ka hor ka dhacay goob war-biyood ah oo lagu murmay.
Sida dadkan ay noo sheegeen Al-Shabaab ayaa biyihii ku jiray goobtaas waxay isku dayeen inay ka iibiyaan dadka deegaanka, waxaana arrintaas ka dhiidhiyey oo dagaal ku qaaday dhalinyaro is-abaabushay oo ka soo jeeday dadka deegaanka.
Dhalinyaradii deegaanka oo looga awood roonaaday dagaalkaas ayaa u kala hayaamay magaalooyinka aysan Al-Shabaab joogin ee gobolka Bay.
Intaas kadib Al-Shabaab ayaa maanta tuulooyin isu dhaw-dhaw oo hoostaga Buur-hakaba waxay ka afduubteen dad u badan waayeel iyo caruur oo dhalinyarada baxsatay ay isku heyb-yihiin.
Dadka noo waramay waxay noo sheegeen in dadkaas hada lagu hayo deegaanka Iidaale ee gobolka Bay, isla markaana sii deyntooda lagu xiray in la keeno dhalinyaradii is abaabushay ee dagaalka kala hor-tagtay Al-Shabaab. Waxayna dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbaeed ka dalbadeen in laga gacan siiyo sidii dadkaas looga soo deyn lahaa dagaalamayaasha heysta.